फलफुल खानुहुन्छ ? सावधान ! - Vishwa News
योगेश डंगोल ‘आदी’/न्यूयोर्क
अमेरिकामा हुनुहुन्छ र फलफुल खाँदै हुनुहुन्छ भने पर्खनुस् । पहिले फलफुलमा टाँसिएको स्टिकर हेर्नुस् । त्यसमा कतिवटा अंक छ ? कतिबाट शुरु भएको छ ? त्यो अंकको अर्थ के हो, के जनाई रहेको छ ? त्यो जानकारी लिएर मात्र खाँदा सही फलफुल खाएको ठहर्नेछ । नत्र अनेकौं डरलाग्दो रोगको शिकार हुन सक्नुहुन्छ । सरकारको स्वास्थ्य बिभागले फार्मबाट तुरुन्तै टिपेर ल्याएको फार्मर्स मार्केटको अर्गानिक फलफुल बाहेकका कुनै अन्य फलफुलको उत्पादन प्रकृया र भण्डारन गरिएको अवस्थाको चेकजाँच गरेर स्टिकर टाँसेपछि मात्र बजारमा बेचबिखन गर्न पाईन्छ । अमेरिकाको समस्या के छ भने, युरोपमा बन्देज गरिएको अवस्थाको फलफुल, तरकारी, जुस इत्यादी अमेरिकामा खुलेआम बिक्री बितरण भईरहेको हुन्छ । भारतबाट बिषाक्त तरकारी नेपालमा भित्रिएको समाचार जस्तै डरलाग्दो तरकारी फलफुल अमेरिकामा पनि बिक्री भईरहेको छ ।
प्लास्टिकको भाँडोमा माईक्रोवेभ मार्फत तताएर खाँदा जस्तै खतरनाक तत्वहरु पेस्टिसाईट्स, प्रोसेस्ड र इन्जेक्टेड फलफुल तरकारीहरु खाँदा शरिरमा प्रवेश गर्दछ । जसको कारण क्यान्सर जस्ता रोगहरु लाग्ने सम्भावना बढी रहन्छ । यो नसोच्नुस् कि अमेरिकामा सबै कुरा राम्रो पाईन्छ । अमेरिका पैसाले सबै काम कुरा गर्न सकिने देश हो । कसैसँग यथेष्ट पैसा छ भने अमेरिकामा मान्छे मारेपनि कानूनका अनेक छिद्र प्रयोग गरी जेल बस्न नपर्ने देश हो । यहाँ जुन सामान, जति मुल्यमा, जसले जसरी बेचेपनि महंगो मुल्य लिएको निहुँमा कारवाही हुँदैन । उपभोक्ता आफै सचेत छैन भने यहाँ उस्तै चिजलाई दोब्बर मुल्य पनि लिइ दिन सक्छ । नेपालमा जस्तो खाद्य पदार्थको मुल्य सरकारले निर्धारण गर्दैन । अर्थात यहाँ समाजबादको कुनैपनि तप्काको अभ्यास हुँदैन । त्यसैले आफुले दैनिक खाने खाना कस्तो छ ? त्यो जान्न जरुरी छ । खासगरी फलफुल र तरकारी ।
सामान्यतया हामीले बजारमा फलफुल छान्दा चिल्लो दाग नलागेको हेरेर छान्छौं । जुन गलत हो । राम्रो फलफुल चिल्लो हुँदैन । धरैजसो फलफुलमा लामो समयसम्म किरा नलागोस् भनेर किरालाई मन पर्ने फलफुलको गुण नै सुई हालेर निष्कृय पारेको हुन्छ । नकुहिनको लागि र फलफुलमा साईनिङ् ल्याउनको लागि टोक्सिक केमिकल्स लगाईन्छ । फरबुजालाई गुलियो बनाउका लागि इरिथ्रोसिन बी नामक सुई लगाइन्छ । रंगको सुई नगलाएको फरबुजा सिन्दुर जस्तो रातो कहिल्यै हुँदैन । काँचो केरा, गोलभेडा, आँप, सुन्तला, स्याऊ इत्यादी फलफुललाई काँचैमा किराबाट बचाउनको लागि टिपेर सुईबाट बाँकी पकाउनेसम्मको प्रकृया पुरा गरेको हुन्छ ।
हरेक फलफुलमा टाँसिएको अंकको अर्थ के हो ?
यदि फलफुलमा ५ अंकवाला स्टिकर टाँसिएको छ र त्यो ९ बाट शुरु हुन्छ भने त्यो पूर्ण रुपमा शुद्ध अर्गानिक हो । यस्तो फलफुल होलफुड, कुनै कुनै ट्रेडर्स जो, सबै अर्गानिक मार्केट्समा पाईन्छ । (न्यूयोर्क ज्याक्सन हाईट्समा बस्नुहुन्छ भने ३७ एभेन्यू बिटवीन ८४ र ८५ स्ट्रिटको अर्गानिक मार्केटमा पाईन्छ)
कुनै फलफुलमा ५ अंकवाला स्टिकर छ तर ८ बाट शुरुभएको छ भने जेनेटिकल्ली मोडिफाईड हो । खान सकिन्छ र अर्गानिक होइन ।
तँपाईले किन्नु भएको फलफुलमा ४ अंकवाला स्टिकर छ । जुन ३ वा ४ अंकबाट शुरु भएको छ भने आजै खान बन्द गर्नुहोस् । त्यो फलफुललाई ३ ओटा कृतिम प्रकृया पुरा गरेको छ । पकाउन, सुरक्षित राख्न र चिल्लो देखाउन ३ किसिमको हानिकारक केमिकलको प्रयोग गरिएको छ । थप जानकारी हेल्थ डिपार्टमेण्टको वेवसाईड वा गुगलदाईबाट लिन सकिन्छ ।
हरेक वर्ष अमेरिकामा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सरकारले चेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ । तर व्यापारी र पहुँचवालाले त्यो समाचार बाहिर आउन नै दिदैनन् । सरकारी निकायले पनि, कारण भगवान जानुन, तर तदारुकताका साथ पहल गर्दैनन् । जबकी युरोपमा हरेक महिना यस सम्वन्धमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु भईरहेका हुन्छन् । वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाईजेशन र डिपार्टमेण्ट अफ हेल्थ लगायतका सरोकारवाला निकायलाई सबै यथार्थ थाहा छ तर अमेरिकाको ३० करोड जनताको बजार मागलाई बिचार गरेर यस बिषयमा मौन देखिन्छ ।
सरकारले रोकोस् नरोकोस्, आफु र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यलाई बिग्रनबाट रोक्ने काम तँपाईको हो । थोरै खानुहोस् तर राम्रो शुद्ध खानुहोस् । खानाको स्वरुपमा बिष सेवन गरेर बहुमुल्य जीवनलाई रोगको मुख नधकेलौं ।
भारतीय चन्द्रयान-२ सम्पर्कबिहिन
प्रदर्शनमा उत्रिए कारवाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु, मृतको संख्या ४९ पुग्यो